“Waxaan diyaar u ahay inaan bixiyo wax walba, sababa la xiriira ku guuleysiga Premier League” – Saalax – Gool FM
“Waxaan diyaar u ahay inaan bixiyo wax walba, sababa la xiriira ku guuleysiga Premier League” – Saalax
Dajiye March 17, 2019
(Premier League) 17 Marso 2019. Xidiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax ayaa ka hadlay waxyaabo badan ee quseeya xirfadiisa iyo goolashiisa xili ciyaareedkan iyo sheekooyin kale ee la xiriira waxyaabihii dhacay dhawaanahan.
Saalax ayaa sidoo kale faalo ka bixiyay loolanka adag ee xili ciyaareedkan kala dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Manchester City ee ah ku guuleysiga horyaalka Premier League.
Dhinaca kale Maxamed Saalax ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu bixiyo wax walba, si ay ugu guuleystaan horyaalka Premier League xili ciyaareedkan.
“Waxaan diyaar u ahay inaan bixiyo wax walba si aan ugula guuleysto Liverpool horyaalka Premier League, sababtoo ah tani waa riyada taageerayaasha ee sanado badan”.
“Cadaadiska waa mid aad u wanaagsan, waxaan ognahay inaanan ku guuleysan horyaalka mudo dhan 29 sanadood, qof walba ayaa ka hadlaya sanadkan, iyo soo laabashadeena, waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano horyaalka”.
“Kulan kasta ee aan ciyaareyno waxan kula dhaqmi doonaa xuduudiisa, kulan walba wuxuu inoo yahay sida final oo kale, waxaan dooneynaa inaan guuleysano si aan horumar u sameyno”.
Ugu dambeyntii Maxamed Saalax ayaa waxaa wax laga weydiiyay weerarkii cunsurnimada ahaa ee la tilmaamay inuu kala kulmay kulankii West Ham United wuxuuna yiri:
“Waligay uma maleenayo in aan halkan kala kulamayo midabtakoor, waxaa jirtay xaalad, laakiin waxay ahayd shakhsi ahaan”.
Griezmann oo dib u bilaabay inuu ka fikiro mustaqbalkiisa Atletico Madrid & Barcelona oo diyaarsatay qorsho cusub ay ku heli karto saxiixiisa
Valverde oo si rasmi ah daaha kaga rogay Liiska xidigaha Barcelona kaga qablaya kulanka caawa ee Real Betis